2.16 files Ladnaansho DropBox tirtiray o
Ma wajahay rajada faylasha midkood laga badiyay ka drive dibadda ama gaari ku adag? Haddii aad ay ku guda jiraan xilliga in waali ah meesha aad ayaa laga badiyay faylasha qaar si xushmad gaar ah oo qalad qaar ka mid ah, virus, iyo dhibaatooyinka-in farsamo si kasta oo kale oo ka dibna aadan u baahnayn inuu seego ah mahad wadnaha laba qalab awood badan kabashada xogta. Maqaalkani waxa uu isku dayi doonaa inaan iftiimin labada qalab halka idiin siinayo dulmar guud oo tallaabo-tallaabo ah sida aad u soo kaban karto, faylasha aad tirtiray.
EaseUs tirtiray kabashada file
EaseUs waa software loogu talagalay in la hirgaliyo adeegyada kabashada ugu wanaagsan ee isticmaala noocyo kala duwan oo dhufto. Software waa dawaarle sameeyey si wax soo kabsado nooca file in kasta oo gebi ahaanba qalabka laga bilaabo kumbiyuutarada, kaararka Memory, Flash kaxeeya, casriga ah, kombiyuutarada Mac iwm software waa fududahay in la isticmaalo siiyo in uu leeyahay interface user-friendly ah oo la shaqeeya by saaxir naqshado looga dan leeyahay sidii user ee soo kabsaday xogta.
Waa fududahay in la isticmaalo.
Waxaa soo kabanayo nooc kasta oo xog tirtiray.
Waxa ay taageertaa soo kabashada ee storage devices kasta.
Waxaa la taageeraa labada dhufto ee Mac iyo Windows
Waa version free xadidan yahay.
Waa yara qaali ah.
Fursada kale oo aad isticmaali kartaa inuu ka soo kabsado files tirtiray waa aalad software Wondershare Data Recovery. Tani waa qalab kale oo Sarre muuqaalada weyn ee boqortooyadii reer shaqeynta iyo waayo-aragnimo user. In la eego geynta, waa qalab aad u boosaska badan in kaban karin qaab la taaban karin ee file aad raadinayso inuu ka soo kabsado. Tani waa in ay tusinayaan in aad soo kaban karto, waraaqaha, videos, Cajalado files, files fariin, files ciriiri, iyo sawiro iyo kuwo kale. Software sida caadiga ah ku samayn doonaa si aad u wanaagsan inay soo dhiciyaan files ka kaydinta wax qalab-ahaan kaararka xusuusta, flash drives, kaamirada, drives saari karo ama xitaa drives adag. Markii la isbarbar dhigo oo ka mid ah laba qalab si fiican loo muujiyey shaxda hoos ku qoran:
Files Document, files videos, files Cajalado, files fariin, files Archive, files Photo
Fast laakiin sidoo kale waxay ku xiran tahay qadarka xogta in la soo kabsaday
Kaararka Memory, Flash drives, kaamirada, saari kaxeeya, Hard eryi
1 Year License (Mac): $ 79.95Lifetime (Mac): $ 89.95Family License (Mac): $ 259.95 1 Year License (Win): $29.95 / YearLifetime (Win) $ 39.95
Fast iyo kalsoonaan karo
Kaararka Memory, Flash drives, kaamirada, saari kaxeeya, buugaagta Mac, desktops, server Mac,
Mac, Windows, Android, macruufka, Email
Data Recovery Wizard Professional 9.0 (Win): $69.95 Data Recovery Wizard Pro la Downlaods Media (guuleysan): $ 99.90 Data Recovery Wizard Farsamo 9.0 (Win): $499.00 Data Recovery Wizard u Mac 9.1 (Mac): $89.95 MobiSaver (Iphone): $59.95 MobiSaver u Mac: $79.95 MobiSaver u Android: $39.95
Sidee inuu ka soo kabsado Data Isticmaalka Wondershare Tool
Ka soo kabashada xogta aad badiyay isticmaalaya Wondershare Data Recovery Tool waa badan fudud oo dhan aad u baahan tahay in la sameeyo waxa la raaco tallaabooyin yar oo sahlan.
Tallaabo 1: Ku rakib Tool oo ku Launch
Waxaad u baahan doontaa inaad kala soo baxdo iyo rakibi Wondershare software kabashada on your computer ama laptop iyo abuurtaan software ah. : Waxaad ka soo dejisan kartaa http://www.wondershare.com/data-recovery/
Waxaad heli doontaa in ay doortaan version of-the computer dhufto ee ku taageereen oo ay taageerayaan waa Mac iyo Windows. Waxaa loo ogol yahay in aad ka soo dejisan iyo rakibi version ah oo lacag la'aan ah, laakiin functionalities aad ku koobnaan doonaa. Si loo gaaro shaqeynta buuxda, waxaad u baahan tahay in la sameeyo iibsiga buuxda oo la mid ah. Fadlan la soco in aanad gashato meel xusuusta aad rabto inuu ka soo kabsado files ka ah.
Talaabada 2: Dooro Xulashada aad rabto waan ceshan
Marka aad abuurtaan codsigaaga, waxaad yeelan doontaa afar doorasho oo la kala dooranayo ee interface user:
• lumay Recovery File
• ceeriin Recovery
• Recovery ah Barzakh,
• Recovery biloow
Haddii aad doorato lumay Recovery File ka fursadaha, waxaa laguu keenay in doonaa in ay ka gudbaan hubi drive aad dooneyso inay ka soo kabsadaan faylasha lumay ka. Ka dib markii baaritaanka iyo rumayn drive, Riix sanduuqa Hubinta in loo sahlo Deep Scan . Riix Scan .
Sug habka iskaanka si markaas ku dhameysan ku eegaan files iyo kabsado hadba waxaad doonayso oo ka dibna riix Ladnaansho .
Haddii doorasho ku fashilanto waxaad yeelan doontaa in ay tagaan isku day mar kale wakhtigan la isticmaalayo ceeriin Recovery . Marka aad soo xulay ikhtiyaarka sidoo kale waxaad u baahan doontaa inaad doorato drive aad jeclaan lahaa inuu ka soo kabsado guji Ladnaansho .
Dooro Scan u tirtiray Faylal ay ka dibna riix on scan.
Labada doorashooyinka sare sida caadiga ah si aad u wanaagsan la soo kabsaday files ka storage devices tirtiray shaqeyn doonaan. Xaaladdan oo kale ah in aad u baahan tahay inuu ka soo kabsado qoruhu in ku jira faylasha aad drives, waxaad u leedahay in ay doortaan Recovery xijaab . Ka dib markii aan sidan doorto, waxaad u baahan doontaa inaad doorato disk meesha aad aad badiyay files dooro on Quick Scan ama Buuxi Search ka dibna riix on Scan. Guudmar ku files soo kabsaday markaas ka dhacay on Ladnaansho .
/ Haddii aad soo martay dhibaato inta lagu jiro geedi socodka soo kabashada aad mar walba isku dayi kartaa bilaabay ka halkaas oo aad ka tagtay la isticmaalayo Recovery biloow.
Hadda waxaad garan oo qalab uu ka soo xusho mar kasta oo aad qabto dhibaato xogta ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaad mar walba isku daydo in aad taageerto ilaa xogta si loo hubiyo in aad loo yareeyo khatarta badiyay files xasaasi ah
Alternative si DDR Pen Drive Recovery: Wondershare Data Recovery
> Resource > bedelan karo > Easeus tirtiray kabashada file waana dhabaha ugu wanaagsan